Gini Na-eme Nnukwu Onye Nyocha? | Martech Zone
Tuesday, May 5, 2009 Sunday, Eprel 3, 2016 Douglas Karr
na Nzukọ eMetrics Marketing Optimization Summit, anyị nwere mkparịta ụka na-adọrọ mmasị na ihe na-eme nnukwu nyocha data. Na ụlọ jupụtara na ndị nyocha n’ime ụlọ, ọ bụ ezigbo ajụjụ. N'ozuzu, ndị mụ na ha rụkọrọ ọrụ kwetara na e nwere ndị na-enyocha azụmahịa na ndị na-enyocha data - na atụmanya dị na nke ọ bụla dịtụ iche.
Ndị na-ahụ maka azụmaahịa na-enye ozi na usoro nke na-enye ohere ịme mkpebi na ebumnuche azụmaahịa n'uche. Ndị nyocha data na-enye data ahụ. Ha abuo kwesiri ikwuputa data ahu n'uzo nke kwesiri ya na ndi na-ege nti na ndi na ege nti nwere ike iru nkwubi okwu site na nkpachapu anya.
Enwere otutu mmadu kwenyere na ike nke onye nyocha bu nnukwu ihe. Chris Worland nke Microsoft tinye ndị nyocha na bọket 3 nwere uche - ndị onye na-ewere iwu, na influencer, Na tụkwasịrị obi na mkpebi. Omenala na usoro nzukọ gị ga-ekpebi ịdị arọ nke ndị nyocha gị.
Andrew Janis kwadebere ya na ndị nyocha nwere ike ikewapụ data na-akpali akpali na nke a na-eme eme. Ha niile kwenyere na njirimara nke ndị na-enyocha data na-aga nke ọma bụ ikike ịmechi gburugburu na gburugburu data na ịhazi ya nye ndị na-ege ntị, ghọta azụmaahịa na ụlọ ọrụ ahụ, na ịbụ onye nwe ọhụụ.
Obi abụọ adịghị ya na nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịga nke ọma ma ọ bụ daa dabere na ikike na mmetụta nke ndị nyocha ha. Maka ụlọ ọrụ ndị na-enweghị nnukwu, ndị ọrụ gị na-eyikarị okpu dị iche iche - onye ọ bụla nwere onye na-enyocha data ma na-enye nsonaazụ. Họrọ ezigbo ndị nyocha (ma ọ bụ ndị ọrụ na-enyocha) dị oke mkpa maka ọganiihu ma ọ bụ ọdịda nke ụlọ ọrụ gị. Jiri amamihe họrọ.
Mee 7, 2009 na 5: 01 PM
Ndị nyocha azụmahịa ga-adị mma na nyocha na njirimara na-emekarị. Isi mmalite nke ọnwa 3 - 6 nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ngwaahịa ọkachasị na mpaghara teknụzụ dị mkpụmkpụ.
Mee 8, 2009 na 9: 19 PM
Akwa post! Anyị ndị okike na-eme nke ọma na ozi ndị nnukwu nyocha na-eweta na tebụl iji nweta ihe ịga nke ọma na ihe ndị ahịa. Anyi choro ndi okacha mara nma ka ha bia n’iru.